Dallada SSE Oo Soo Dhawaysay Go’aankii Madaxweyne Siilaanyo ka Qaatay shirka London | Salaan Media
Dallada SSE Oo Soo Dhawaysay Go’aankii Madaxweyne Siilaanyo ka Qaatay shirka London
Dallada SSE oo guul iyo gobanimo u aragtay in Madaxweynaha Somaliland go’aan kama dambeys ah ka qaatay in aanay Somaliland ka Qayb galeynin Shirka London.
– Inuu yahay go’aan garab siiyay wixii ummadda reer Somaliland ay isku raaceen markii ay la soo noqdeen qaranimadooda.
– Waa go’aan adkeynaya midnimada isku duubnida dadka reer Somaliland.
– Dallada SSE waxay u aragataa inuu go’aankani adkeynayo aaminadaa shicibka reer Somaliland ay ku qabaan xukuumaddooda isla markaana ay xoojinayso sumcada iyo karaamada xukuumadda Somaliland.
– Dallada SSE waxay u aragtaa in ka qayb galka kulankaasi uu dhaawac ay adagtahay sida looga soo kabto uu u geysan lahaa qaranimada iyo dowladnimada aynu ku taamayno, isla markaana jaahwareer uu gelin lahaa toobiyaha cad ee aynu maanta u marayno ka midho dhallinta yoolka la higsanayo. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo go’aanka maanta laga gaadhay arrinkan oo ah mid u hiilinaya ka dhabeynta iyo ka midho dhallinta himilooyinka ummada reer Somaliland ay higsanayaan inay gaadhaan mustaqbalka dhow.
– Waa go’aan geesinimo isla markaana ay Dalladu u aragto inuu noqon doono g’aan la inagu ixtiraamo si cadna u muujinaya sida loogu adagyahay qaddiyada Somaliland shicib iyo xukuumadba.